Abavelisi bempahla yokuhlamba iimpahla, abaXhasi - China yokuhlanjwa kwengubo yefektri
Ingxowa enkulu yeNylon yokuhlamba iimpahla
Ukuba ukhangela umsebenzi onzima kunye nengxowa enkulu yokuhlamba iimpahla, le ndlela yokuhlamba iimpahla ikulungele. Olu hlobo lwebhegi lunokugcina iimpahla ezingama-20 ukuya kuma-30. Uyilo oluphezulu kukutshixa umtya, yintoni enokugcina iimpahla zakho kwingxowa yokuhlamba iimpahla.
Laundry Bag ubhaka
Le bhegi yokuhlamba ibhegi yenziwe nge-polyester, yomelele kwaye yomelele. Ayinamanzi kwaye iyahlanjwa ngomatshini. Ukuqiniswa okuqinisiweyo kwindibaniselwano nganye kuqinisekisa ukuba iiseyile azikrazuki ngokulula kwaye kube lula ukuthutha ngobunzima obungephi.
Ingxowa yeMesh yokuhlamba iimpahla
Kuqala kuya kufuneka uyazi ukuba unokwenza iseti okanye isiqwenga esinye. Le bhegi yokuhlamba impahla yomelele, yomelele kwaye iyahlambeka ukukhusela iimpahla zakho. Isebenza kuzo zonke iintlobo zokuhlamba iimpahla, kubandakanya iimpahla zangaphantsi, iibras, iisokisi, izinto zomntwana, iihempe zokunxiba.
Umtya weBhegi yokuhlamba iimpahla
Le ngxowa yeLat Drawing Mesh Laundry yenza kube lula ukugcina kunye nokuphatha iimpahla. Yenziwe ngenayiloni kunye nezinto ezipholileyo. Izinto eziphakathi kunye nezantsi yipolyester kunye nenye indawo enemingxuma yinylon, ke yomelele kwaye ithembekile.
Umqhaphu mpahla ubhaka
Okokuqala, ibhegi yethu yebhegi yokuhlamba iimpahla yenziwe ngokwezifiso, oko kuthetha ukuba unokuba noyilo kunye nobukhulu. Le ngxowa yokuhlamba iimpahla yenziwe ngezinto zelaphu ezihlala ixesha elide kunye namagxa anokuhlengahlengiswa. Ibhegi yokuhlamba yimbala yendalo.